YAAB: Alisson Becker Oo Xiddig Ka Tirsan Liverpool Ku Eedeeyey Goolkii Uu Lionel Messi Ka Dhaliyey Lugtii Hore Ee Semi-finalka Champions League ee 3-0 Ku Dhamaatay - Gool24.Net
YAAB: Alisson Becker Oo Xiddig Ka Tirsan Liverpool Ku Eedeeyey Goolkii Uu Lionel Messi Ka Dhaliyey Lugtii Hore Ee Semi-finalka Champions League ee 3-0 Ku Dhamaatay
February 9, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Goolhayaha Liverpool, Alisson Becker ayaa mid ka mid ah ciyaartoyga kooxdiisa ku eedeeyey inuu sabab u ahaa in Lionel Messi uu ka dhaliyo laaggii xorta ahaa ee kulankii hore ee Camp Nou ka dhacay ee Semi-finalka Champions League ee xili ciyaareedkii hore.
Alisson ayaa u sheegay tababaraha xulka qarankiisa Brazil, Tite in difaaca Liverpool ee Joe Gomez uu u sahlay Messi in uu laaggaas xorta ah ka dhaliyo Liverpool ka hor intii aanay ciyaartii labaad ee Anfield kaga soo kabanin 4-0 ay ugu gudbeen finalka.
Filim dhowaan soo baxay oo ay duubtay shirkadda Amazon oo magaciisa la yidhaahdo ‘All or Nothing: Brazil National Team’ ayaa waxa qayb ka mid ah lagu waraysnaayaa tababaraha xulka qaranka Brazil, Tite, waxaana uu ka warramayaa goolhaye Alisson Becker iyo sidii uu Lionel Messi uga dhaliyey goolka laagga xorta ah.
Alisson waxa uu u tegay difaaca Joe Gomez ka hor intii aanu Messi laagin kubadda goolka noqotay, waxaanu u tilmaamay halka uu xiddiga reer Argentina kubadda marin doono, laakiin Gomez ayaan raacin taladii goolhayihiisa, sida uu sheegay tababare Tite.
“Wuxuu yidhi, ‘Bare sare, in ka badan 30 jeer ayaan soo arkay. Ciyaartoygii derbiga ii ahaa (isku dhigayey kubadda) geesi ma ahayn. Uma tegin kubadda oo dhinaciisa maraysay, aniguna waqti uma helin.” Ayuu yidhi tababare Tite oo ka warramayey wixii uu goolhaye Alisson ku yidhi.
Gomez ayaa ahaa ciyaartoyga xigay dhinaca uu Lionel Messi kubadda soo mariyey, waxaanu madaxiisa u leexiyey dhinacii aanay kubaddu maraynin, isagoo aan isku dayin inuu madaxa ku difaaco kubadda uu Messi soo laagay.
Sida uu tababare Tite sheegay, Alisson waxa uu u sheegay Gomez in uu geesi u ahaado sida Divock Origi iyo Georginio Wijnaldum oo kale oo aanu ka waabannin kubadda, haddii kalena uu marka horeba iskaga joogo inuu ka mid noqdo ciyaartoyga kubadda isku dhigaya.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool oo kulankii hore lagaga badiyey 3-0 waxay ciyaartii labaad ku adkaatay 4-0 ay ugu gudubtay finalka oo ay ku qaadday koobka Champions League.